सडक छेउछाउ 'मर्निङ वाक' गर्दै हुनुहन्छ? श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्तेला
Monday, 19 Nov, 2018 7:32 AM
काठमाडौ । सहरका सडक छेउछाउ मर्निङ वाक गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने ख्याल गर्नुहोस् ! बाहिरी प्रदुषणका कारण हानिकार कण मिसिएपछि हावाले यतिबेला नैसर्गिक गुण गुमाएको छ । त्यसैले दुषित वायुका कारण फोक्सोलगायत संवेदनशील अंगमा श्वासप्रश्वासजन्य रोग निम्तिन सक्छन् ।
बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण मर्निङ वाक नगर्न वीर अस्पतालका वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ प्राडा. ढुण्डिराज पौडेलको सुझाव छ ।
सास फेर्दा थुलोधुवाँका कण असर पुग्छ, उनले भने - ठुला कण श्वासप्रश्वास नलीमा अडकन्छन् । मसिना कण भने सीधै फोक्सोमा पुग्छन् ।
२.५ माईक्रोनभन्दा साना कण सीधै फोक्सोमा पुग्छन् । फोक्सोबाट रक्तसञ्चार प्रणालद्धारा मुटु, मिर्गौला, छालालगायत अंगमा असर पुग्छ, डा. पौडेलले भने । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।